Kaominina mpanangom-bokatra nikotinamide (1094-61-7)
SKU: 1094-61-7 Sokajy: Weight Loss
Rano nikotinamide mononucleotide (NMN) vovoka (1094-61-7) video
Rano nokotinamide mononucleotide (NMN) poids (1094-61-7) Description
Ny nokotinamide mononucleotide roque nicotinamide ("NMN" sy "β-NMN") dia nucleotide azo avy amin'ny ribose sy ny nikotinamide. Tahaka ny nikotinamide riboside, ny NMN dia endriky ny niacin, ary ny olombelona dia manana enzymes izay afaka mampiasa ny NMN mba hamorona adenine dinucleotide (NADH) nicotinamide.
Satria ny NADH dia mpiara-miasa ho an'ny fitsaboana ao anatin'ny mitochondria, ho an'ny sirtuins, ary ho an'ny PARP, NMN dia nianatra ny modelim-biby ho toy ny mety ho mpitsabatsabaka mahaleotena sy antitra. Ny orinasa fanampiny fanafody dia efa nivarotra an-tsokosoko ny vokatra NMN milaza ireo tombontsoa ireo, na dia tsy misy fianarana momba ny toeram-pitsaboana amin'ny vahoaka aza.
Rano nokotinamide mononucleotide (NMN) poids (1094-61-7)
Anarana simika Beta-nicotinamide ribose monophosphate; Rano nikotinamide mononucleotide poids; AC1Q6RVF; AC1L23AN; NMN (+); SCHEMBL6858129
molekiolan'ny Formula C11H15N2O8P
molekiolan'ny Wvalo 334.22
mitsonika Point > 96 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Araka izany, araka ny asehon'ny sary 3, ny nicotinamide dia nanjavona tao amin'ny ra tamin'ny antsasaky ny ora 5.3, fa ny antsasaky ny asidin'ny nicotinic dia ora 1.1.
Solubility Methanol (kely), rano (malemy)
Storage Temperature Hygroscopic, -20˚C Frizisk, ao ambanin'ny Atmosphère Inert
Application Mba hilalao ny anjara asan'ny fiainana maharitra sy ny fitsaboana diabeta
Tsanganana nokotinamide (NMN) powder (1094-61-7) Description
Ny fikarohana vaovao dia maneho fa ny NMN dia afaka mamerina ny metabolismy amin'ny sela, ary manana fiantraikany lalina amin'ny fanoherana. Ny voajanahary ao amin'ny vatana, ny NMN (β-nicotinamide mononucleotide) dia tena manakiana ny fiovan'ny elanelana amin'ny angovo. Ny fampitomboana ny NMN amin'ny maha-rafitra azy isan'andro dia mety hanatsara ny famerenana ny angovo, ny fiarovana amin'ny dingana efa antitra, ary ny fihenan'ny tsimokaretina VIH. Ny NMN dia cofactor amin'ny fanehoan-kevitra miverimberina, fomba fanao mahakasika ny asany amin'ny metabolika amin'ny fananganana ATP ny molekiolan'ny famatsiana herinaratra ambony. Ny NMN dia ahitana firaiketam-pikirakirana Sirtuin izay mampiroborobo ny mari-pahaizana momba ny metabolika sy ny faharetana.
Fampiasana ny nicotinamide mononucleotide (NMN) powder (1094-61-7)
Ny singa nokotinamida ao amin'ny sela olombelona dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny taranaka energie, dia tafiditra ao amin'ny tsindrimandry NAD (dinikleotide adenine nicotinamide, fampidiran-kònzyme ny fiovan'ny selenium), ampiasaina amin'ny fananganana antibiotika, siramamy azo avy amin'ny ra ary fitsaboana hafa.
Ny vitaminam-pamokarana nokotinamide dia vitaminina tsy misy loto, Ny vokatra dia fotsy fotsy fotsy, tsy misy sakafom-biby na tsy misy rongony, mangidy ao anaty tsiro, mivelatra amin'ny rano na etanôl, izay simika ao amin'ny glycerine.
Ny nicotinamide Mononucleotidepowderis mora mivoaka tsiro, ary mety hozaraina betsaka amin'ny vatana, ny metabolites na ny prototype mihoatra ny fandroahana haingana avy amin'ny urine. Ny nicotinamide dia ampahany amin'ny coenzyme I sy ny coenzyme II izay mitana ny anjara asan'ny fizarana rano amin'ny toeram-ponenan'ny taova biolojika, dia afaka mampiroborobo ny fizotry ny oksika sy ny metabolisma biolojika, ny fikojakojana ara-pahasalamana (indrindra ny hoditra, ny trakta famafazana ary ny rafi-pitabatabana) dia manana andraikitra lehibe.
Ankoatra izany, ny nikotinamide dia manakana sy manasitrana ny fo, ny sinus nodia sy ny arithmetmias experimenta manara-penitra, ny nicotinamide dia afaka manatsara ny tahan'ny fo sy atrioventricular block verapamil.
soa ny Mononucleotide Nicotinamide (NMN) powder (1094-61-7)
Mampitombo ny fatran'ny angovo ny NMN - NAD + manampy amin'ny fampihenana ny sakafo toy ny saka amin'ny angovo.
Mampiroborobo ny atidoha mahasalama sy ny fihinanana kardia fiterahana.
Fanamboarana ratra amin'ny ADN Anti-Aging - NAD + dia ampiasaina hanamboarana tady ADN.
Ny SIRTUIN Activator - NAD + dia takiana amin'ny faharetan'ny faharetan'ny fototarazo.
Ny NMN dia fitaovana ampiasain'ireo mpahay siansa Harvard mba hamerenana ny marika famantarana ny fahantrana amin'ny totozy mipoitra izay nanomboka ny hazakazaka amin'ny fanafody NAD.
Ny fitsaboana NMN dia miaro amin'ny tsy fahampian'ny ati-doha ateraky ny atidoha
Ny fitsaboana NMN dia mamela ny fahavoazan'ny kognita
Ny monotonucleotide nicotinamide dia manakana ny fampiatoana ny JNK mba hamerenana ny aretina Alzheimer
Ny NMN dia afaka mamerina ny fambara amin'ny voalazan'ny modelin'ny AD
Recommended nicotinamide mononucleotide (NMN) powder (1094-61-7) Dosage
Ny dosage amin'ny ankapobeny dia azo atao eo amin'ny 250 - 1500 mg isan'andro.
Ny NMN dia mitombo haingana be ary manana ny antsasaky ny androm-piainany, mba hitazomana ny avoakan'ny NAD + avo lenta amin'ny andro maro araka izay azo atao, dia ilaina ny maka kapnule 125 mg amin'ny fifohazana ary ny iray amin'ny tolakandro raha mandray 250 mg isan'andro.
Side effects ny Mononucleotide Nicotinamide (NMN) powder (1094-61-7)
Raha toa ny dipoavatra nokotinamide mononucleotide (NMN) dia fanampim-baovao vaovao ary mitohy ny fikarohana, ny fikarohana natao hatramin'izao dia mampiseho azy io ho tena azo antoka sy tsy misy poizina.
Zava-mahagaga ny vokatra, saingy ny fahosana, ny fitabatabana, ny hatsembohana, ary ny tsy filana dia notaterina tamin'ny tranga sasany.